R/Wasaaraha Lubnaan oo $16 milyan u diray gabar kuwa Model-ka Bikin-ga ee Koonfur Afrika… – Hagaag.com
R/Wasaaraha Lubnaan oo $16 milyan u diray gabar kuwa Model-ka Bikin-ga ee Koonfur Afrika…
Posted on 1 Oktoobar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Rai’isul wasaaraha Lubnaan Saad Hariiri ayaa wuxuu siiyay in kabadan $ 16 milyan gabar Koonfur African ah oo Bikini-ga xayeysiisa oo la sheegay inuu ka dhaxeeyey xiriir jaceyl ah kadib markii ay ku kulmeen goob lagu raaxeysto oo ku taal Seychelles, sida laga soo xigtay dukumiintiyada maxkamadda Koonfur Afrika oo ay heshay New York Times.
Rai’isul wasaaraha, Saad Hariri, xiligaasi ma joogin xafiiska markii uu dirayey lacagta sanadkii 2013, isu gudbinta lacagta uma muuqato inay jabisay wax sharci ah oo Lubnaan ama Koonfur Afrika ah.
Sheekadan ayaa markeeda hore lagu ogaaday markii laamaha canshuuraha ee Koonfur Afrika ay ka shakiyeen dakhliga gabadhan Model-ka Bikini-ga oo markii hore ahaa shan kun iyo xoogaa bil walba ayaa mar keliya lagu arkay xisaabteeda iyadoo 16 million ku jirta, sidaa darteed waxay qiyaaseen in lala baxsady canshuur, markii lagu soo dacweeyey inay la baxsatay canshuur ayey kashiftay halka lacagta ay ka soo gashay.
Laakiin muujinta kiis maxkamadeedka Koonfur Afrika ee sannadkan ayaa lagu arkay hadiyado xad-dhaaf ah oo la siiyey naagtan model-ka ee da ‘da yar oo waxay ku soo beegantay xilli uu ku jiro marxalad adag Mr.Hariri, oo ah siyaasiga Sunnida Muslimka hogaamiya dalka Lubnaan isla markaana wuxuu yahay saaxiibka Mareykanka.
Ganacsigiisa iyo boqortooyadiisii siyaasada ayaa hoos u dhacday, isagoo shaqaale badan ka joojiyey mushaharkoodii. shirkadii dhismaha oo reerka caanka ku ahaa Saudi Oger ayaa joojisay howlaheedii sanadkii2017, sidoo kale qeybta warbaahintiisa ayaa la dhibaatoonaysa bixinta mushaaraadka.
Xiisad dhaqaale oo soo food saartay Lubnaan ayaa joojisay mudaaharaadyo ka dhan ah dawladda Bishan, Mr. Hariri wuxuu sheegay in dawladda Lubnaan ay ku dhawaaqi doonto “xaalad dhaqaale oo deg-deg ah” oo ay ku riixi doonto tallaabooyin gunti isku geejis dhaqaale ah.
Mr. Hariri kama uusan jawaabin su’aalaha loo diray kooxdiisa warbaahinta oo ku saabsan nooca xiriirka uu la leeyahay Candice van der Merwe, ama hadiyado inuu siiyey.
“Wax alla wixii olole ah oo iga soo horjeeda oo ay soo bandhigeen iyo waxkasta oo ay yiraahdaan, waan sii wadan doonaa shaqadeyda,” ayuu yidhi Talaadadii faallooyin laga sii daayay xafiiskiisa. – Waa run inaynu marayno xaalad dhaqaale oo adag, sidaas awgeedna waa inaan qaadanaa go’aanno geesinimo leh. Mar kasta oo aan gaarno guul, qof ayaa dhalleeceeya arrintaas. ”
[Si gaar ah uma uusan sheegin Ms. van der Merwe ama hadiyadeeda iyada.]
Haddiyaduhu wax xiriir ah kuma lahan dhibaatooyinka dhaqaale ee Lubnaan ee hadda jira laakin Mr. Hariri, waa nin xaasle ah oo leh seddax caruur, wuxuu heystaa lacag ku filan oo lacagtaasi ka bixin karo. Joornaalka Forbes wuxuu ku qiyaasay hantidiisa in ay gaareysay sanadkii 2013 $ 1.9 bilyan, taas oo uu ugu mahadcelinayo ganacsigii uu ka dhaxlay aabihiis, Rafik Hariri, oo sidoo kale ahaa Rai’isul wasaare, waxaa lagu dilay Beirut 2005.